स्वादका लागि होइन, शरीरका लागि प्रिय खाना रोज्नुहोस्, जुन शरीरअनुसार फरक हुन्छन् – Health Post Nepal
२०७५ फागुन २० गते ९:२०
पोषणविद् आफैँमा विवादित छन् । प्रायः मानिस पोषणबारे एउटै तथ्यमा सहमत हुँदैनन् । किनकि, पोषणका सिद्धान्त सबैमा समान रूपमा लागू हुँदैनन् ।
तर, यसमा केही अपवाद पनि छन् ।
यहाँ केही यस्ता पोषणसम्बन्धी तथ्य प्रस्तुत गरिनेछ, जसमा अधिकांश मानिस सहमत छन् ।
१. अतिरिक्त सुगर (चिनीको मात्रा) स्वास्थ्यका लागि महाघातक हुन्छ ।
प्रशोधित खाद्यान्नको स्वाद बढाउन प्रायः उत्पादकले अत्यधिक चिनी थप्ने (मिलाउने) गर्छन् । यस्तोखालको चिनीको मात्रालाई अतिरिक्त सुगर भनिन्छ । सबै जानकार छन् कि, अधिक चिनीको सेवन हानिकारक छ ।
कसैलाई लाग्ला, सुगरमा जिरो क्यालोरी हुन्छ । तर, धेरैले विश्वास गर्छन् कि यसले मधुमेहको जोखिम बढाउँछ, जसका कारण बर्सेनि लाखौँ मानिस मर्न बाध्य छन् ।
सत्य के हो भने, अतिरिक्त सुगरबाट कत्ति पनि पोषण प्राप्त हुँदैन, बरु कुपोषणको जोखिम बढ्छ ।
अतिरिक्त सुगरको सेवनले धेरै र जटिलखालका स्वास्थ्य जोेखिम बढाउँछ । र, यो अहिले विश्वभर नै चासोको विषय बनेको छ । यो मोटोपनको प्रमुख कारक हो भने मुटुरोग र टाइप–२ डाइबेटिजको पनि कारक हो ।
त्यस्तै, अधिक सुगरको सेवनले ननअल्कोहोलिक फ्याटी लिभर डिजिज, इन्सुलिन रेसिस्टेन्स, पेटको मोटोपन र कोलेस्टेरोल पनि बढाउँछ ।
२. ओमेगा–३ फ्याक्ट आवश्यक छ, तर धेरै मानिसले पर्याप्त मात्रामा पाउँदैनन् ।
ओमेगा–३ फ्याटी एसिड मानिसको शरीरले सही रूपमा काम गर्नका लागि अति आवश्यक छ । मानिसको शरीरमा ओमेगा–३ फ्याटी एसिडको मात्रा कम हुँदा वृद्धिको स्तर कम हुन्छ । डिप्रेसन र मानसिक डिसअडरका साथै मुटुसम्बन्धी धेरै जटिल रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । अधिकांश मानिसले ओमेगा–३ फ्याटी एसिड खानाबाट प्राप्त गर्दैनन् । यसको डिफिसियन्सी हटाउन सकेमा धेरै खालका रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
ट्रान्सफ्याक्ट खराब स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ, तर पछिल्लो समय ट्रान्सफ्याक्टको उपयोग निकै बढ्दो छ । उच्च मात्रामा ट्रान्सफ्याक्ट खाँदा क्रोनिक रोगहरू, जस्तै, पेटको मोटोपन, कलेजो सुन्निने र मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम बढाउँछ । ट्रान्सफ्याक्ट केमिकल्ली प्रशोधित तेलबाट बनाइने हुनाले यो नसर्ने रोगसँग सम्बन्धित छ ।
३. कुनै एक खाना सबैका लागि उत्तम डाइट हुन सक्दैन ।
हरेक मानिसमा विविधता छ । शारीरिक बनावट, मानसिक अवस्था, किसिम, वंश, शारीरिक गतिविधि मानिसअनुसार फरक–फरक हुन्छन् । यसका आधारमा कस्तो मानिसलाई कस्तोखाले खाना उत्तम हुन्छ भनी निर्धारण हुन्छ । कसैलाई अत्यन्तै कम कार्बाेहाइड्रेटयुक्त खानाले राम्रो गरिरहेको हुन्छ भने कसैलाई उच्च कार्बाेहाइड्रेटयुक्त शाकाहारी खानाले फाइदा गरिरहेको छ ।
वास्तविकता के हो भने एउटालाई राम्रो गरिरहेको खानाले अर्काेलाई त्यत्तिकै काम नगर्न सक्छ ।
तसर्थ, आफ्नो शरीरलाई कुन खाना उपयुक्त हुन्छ भनी परीक्षण तथा अनुभूत गर्नुपर्छ ।
आफ्ना अत्यन्त प्रिय खानेकुरा र शरीरका लागि प्रिय खानेकुराको फरक छुट्याउनुहोस् ।
४. अप्राकृतिक ट्रान्सफ्याक्ट स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक छ ।
ट्रान्सफ्याक्ट खराब स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ, तर पछिल्लो समय ट्रान्सफ्याक्टको उपयोग निकै बढ्दो छ । उच्च मात्रामा ट्रान्सफ्याक्ट खाँदा क्रोनिक रोगहरू, जस्तै, पेटको मोटोपन, कलेजो सुन्निने र मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम बढाउँछ । ट्रान्सफ्याक्ट केमिकल्ली प्रशोधित तेलबाट बनाइने हुनाले यो नसर्ने रोगसँग सम्बन्धित छ । साथै, यसले श्वास–प्रश्वासमा पनि असर गर्छ ।
५) हरियो भेजिटेबलले सबैको स्वास्थ्यमा सुधार गर्छ
भेजिटेबल (तरकारी) स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ । भेजिटेबलमा, भिटामिन, मिनिरल, फाइबर, एन्टिअक्सिटेन्डका साथै धेरैखाले पोषण पाइन्छन् । धेरै अध्ययनका अनुसार भेजिटेबल खानु भनेको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु हो र हेल्थसम्बन्धी जोखिम कम गर्नु हो । त्यसैले प्रत्येक दिन विभिन्नखाले भेजिटेबल खाने गर्नुहोस् । जुनसुकै उमेरसमूहका वा जुनसुकै स्वास्थ्यसमस्या भएका मानिसले पनि हरिया भेजिटेबल्स खान डराउनुपर्दैन ।
६) अधिकांश मानिसमा भिटामिन डी डिफिसिएनसी हुन्छ, जुन अत्यावश्यक छ ।
भिटामीन डी यस्तो भिन्न प्रकारको भिटामिन हो, जसले शरीरमा हर्माेनले जस्तै काम गर्छ । तर, संसारका धेरैजसो मानिस हिजोआज यो अत्यावश्यक भिटामिनको कमीबाट गुज्रिन बाध्य छन् । धेरै ठाउँमा वर्षको अधिकांश समय सूर्यको किरण उपलब्ध हुँदैन । यद्यपि, सूर्यको किरण उपलब्ध हुने ठाउँमा पनि मानिस घरभित्र बस्न बाध्य छन् । र, बाहिर जाँदा सनक्रिम प्रयोग गर्छन् । सनक्रिमले छालालाई भिटामिन डी स्वस्नबाट रोक्छ । यदि तपाईंको शरीरमा भिटामिन डीको कमी छ भने शरीरलाई चाहिने अत्यावश्यक हर्माेनको कमी छ । र, यसले गम्भीर रोग, जस्तै, मधुमेह, क्यान्सर र ओस्टियोपोरोसिसको जोखिम बढाउँछ ।
खानाबाट प्रशस्त भिटामिन डी प्राप्त गर्न गाह्रो छ । त्यसैले यदि सूर्यको किरणबाट भिटामिन डी प्राप्त गर्ने सम्भावना कम छ भने भिटामन डी सप्लिमेन्ट अर्थात् एक चम्चा कर्डलिभर ओइल खाने गर्नुहोस् ।
७) रिफाइन कार्बाेहाइड्रेट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ।
कार्ब र फ्याटसम्बन्धी धेरै तथ्य बाझिएका छन् । कसैले भन्छन्, फ्याट सम्पूर्ण रोगको जग हो । कसैले सोच्छन््, कार्ब मोटोपन अर्थात् धेरै गम्भीर रोगको प्रमुख कारक हो ।
तर, यो कुरामा भने सबै सहमत हुन्छन् कि अप्रशोधित कार्बको तुलनामा प्रशोधित कार्ब स्वस्थकर हुन्छ । होलफुड, होलग्रिन गेडागुडी, भेजिटेबल र फलफूल अप्रशोधित कार्बका स्रोत हुन् भने सुगर र प्रशोधित पिठो प्रशोधित कार्बका स्रोत हुन् ।
जतिजति हामीले खाने खाना उद्योगमार्फत प्रशोधित हुन्छन्, त्यति नै हाम्रो स्वास्थ्य खस्किरहेको हुन्छ । प्रशोधनका क्रममा खानामा पाइने प्रमुख पोषणतत्व फालिएको हुन्छ । खाद्यान्न उद्योगहरूले फाइबरजस्ता स्वस्थकर तत्व फाल्ने मात्र होइन, अस्वस्थकर तत्व, जस्तै, चिनी, ट्रान्सफ्याट मिलाउने गर्छन् ।
८) सप्लिमेन्टले कहिल्यै वास्तविक खानाको काम गर्न सक्दैन ।
पोषण विज्ञानले भन्छ, खाद्यान्नले नै पोषणको बाढी ल्याउँछ, न कि सप्लिमेन्ट क्याप्सुलले ।
यस्ता भिटामिनबाट प्राप्त भिटामिन, मिनरलजस्ता पोषण खाद्यान्नबाट पाइने पोषणको तुलनामा नगण्य मात्र हुन् । प्राकृतिक खाना खानु निकै महत्वपूर्ण छ । तपाईंलाई आवश्यक पोषण प्राप्तिका लागि केही सप्लिमेन्ट, जस्तै भिटामिन डी भने सप्लिमेन्टबाट लिनु आवश्यक छ ।
९) डाइट्सले काम गरेको छैन भने जीवनशैली परिवर्तन आवश्यक छ ।
डाइट प्रभावकारी नभइरहेको हुन सक्छ, यो वास्तविकता हो । डाइट्सले छोटो समयका लागि नतिजा प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ । तर, जब तपाईं डाइट्स छोड्नुहुन्छ, झन् धेरै अनावश्यक खाना तथा जंकफुड खान मन लाग्छ । यसले झन् छिटो तपाईंको तौल बढ्नेछ । यसलाई यो–यो डाइटिङ भनिन्छ । जति पनि मानिसले डाइट्सको माध्यमले तौल नियन्त्रण गरेका छन्, तिनीहरूको डाइट्स रोक्नासाथ तौल वृद्धि भएको छ ।
यसरी छिटो–छिटो तौल घट्नु र बढ्नु स्वास्थ्यका लागि झन् हानिकारक छ । अनियमित तरिकाले तौल घटबढ हुँदा मुटुमा असर पर्छ । त्यसैले एउटा मात्र सत्य भनेको प्रभावकारी नतिजा प्राप्तिका लागि स्वस्थकर खाना, नियमित व्यायाम तथा स्वस्थकर जीवनशैली नै अपरिहार्य छ ।
१०) अप्रशोधित खाना नै स्वस्थकर हुन्छन् ।
जतिजति हामीले खाने खाना उद्योगमार्फत प्रशोधित हुन्छन्, त्यति नै हाम्रो स्वास्थ्य खस्किरहेको हुन्छ । प्रशोधनका क्रममा खानामा पाइने प्रमुख पोषणतत्व फालिएको हुन्छ । खाद्यान्न उद्योगहरूले फाइबरजस्ता स्वस्थकर तत्व फाल्ने मात्र होइन, अस्वस्थकर तत्व, जस्तै, चिनी, ट्रान्सफ्याट मिलाउने गर्छन् । वास्तवमै खाद्यान्नलाई सुरक्षित राख्नका लागि पनि प्रशोधित खानामा सबै प्रकारका अप्राकृतिक केमिकल मिलाइएको हुन्छ । प्रशोधित खानामा राम्रो खाद्य पदार्थ कम र हानिकारक खाद्य पदार्थ बढी हुन्छन् । राम्रो स्वास्थ्य निर्धारणका लागि ‘रियल फुड’ नै खानुहोस्, फ्याक्ट्रीमा बनेका खाना नखानुहोस् ।